Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera | Izixazululo ze-OMG
Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera
Ama-BWC aqopha amadivayisi okuhloswe ukuthi agqoke iyunifomu yesikhulu sokugunyazwa komthetho, engafaka izingilazi noma izigqoko zokuvikela. Banikeza irekhodi elibanzi lezikhathi zezikhathi ngokombono wesikhulu njengoba izikhulu zisondela ezibophweni zazo zosuku nosuku. Izithombe ezisezingeni eliphakeme ezinamagoli aphezulu zibheka umbono ongaqondakali kubantu futhi zikulungele ukwenza uhlelo lokuphenya ngevidiyo, ngokwesibonelo, ukwazisa ubuso. Ama-amplifiers angaba ntekenteke ngokwanele ukubamba hhayi nje imisindo ehlobene nesimo esigxile kuso nokho ngokwengeza umsindo ohlanganisa izingxoxo zababukeli.
Ukuqamba kwe-BWC kukhuluma ngokwanda okubucayi kokubanzima kusukela ekuqaleni kwamakhamera ahleliwe, lapho izinhlaka ze-CCTV zazingumthetho owamukelwa kabanzi futhi zazingaqopha izithombe futhi zingazwakali. Cishe ngaleso sikhathi, izindawo zokusebenza ezahlukahlukene zokubheka ukuvikela zaseCanada zinikeze imithetho yokuqashelwa kwevidiyo yomkhakha ovulekile, obekelwe ukuphela kwalo mbiko. Ngenkathi izindinganiso eziyisisekelo zokuphepha ezungeze ukubonwa kwamavidiyo ziqhubeka njengakuqala, umhlaba njengamanje uyinkimbinkimbi ngokwedlulele. Njengoba intuthuko yokubuka ithuthuka, izinyathelo ezinkulu njalo zedatha ngayinye (kokubili ividiyo nomsindo) ziqoqelwa ezimeni ezahlukahlukene ngokuqhubekayo (zombili ezimile neziphathekayo) ezinamandla okuxhunyaniswa nenye idatha yomuntu ngamunye (ngokwesibonelo ukubonwa kobuso, imethadatha). Kunengqondo ukuthi i-LEAs izodinga ukucabanga ngokusebenzisa ubuqambi obusha ukubasiza ekwenzeni izibopho zabo. Ngasikhathi sinye, yize kunjalo, ukuqanjwa kweBWC kuveza ukuqinisekiswa kwangempela kwelungelo labantu ekuvikelweni. Siyakwemukela ukuthi ukubhekela ukucabanga kwezokuphepha kusukela ekuqaleni kungavumela ukulingana okufanele kufezeke phakathi kwezimfuneko zokuqaliswa komthetho namalungelo okuvikela abantu.
Kufanele kube nesidingo sokusebenza esibonakalayo sokuthi uhlelo lwe-BWC kuhloswe ngalo ukusidingida. Yiziphi izidingo zokusebenza ama-LEA anezimpendulo zazo ama-BWCs?
Ama-BWC akumele amukelwe ngokuyinhloko ngenxa yokuthi angabukwa njengethuluzi elidingekayo. Kufanele zigwetshwe ngokubaluleka kokubhekana nemibandela yokusebenza ecacile endaweni leyo ethunyelwa kuyo.
Ingabe ama-BWC kufanele abe yimpendulo ephumelelayo yezidingo zokusebenza ezihlukanisiwe? Ama-LEA kufanele aqaphele imikhawulo yokuqamba izinto ezintsha. Izingxenye zeziqephu zingavela ngaphandle kokuhamba kwekhamera, ama-akhawunti womsindo angahle angabi khona ngenxa yobubanzi noma isisekelo sokududulana, noma iphutha lomuntu lingavula ukuqina kwezindaba futhi kunciphise ukwanela kwazo. Ngethuba lokuthi ama-akhawunti enzelwe ukusetshenziswa njengobufakazi ezinqubweni zenkantolo, ama-LEA kufanele abheke kuqala izimfanelo eziqashelwa Izinkantolo zokubekezelela izindaba njengobufakazi njengoba nje nezindlela zokubutha nobuhlakani ezihlongozwayo zokuqinisekisa ukuthi lezo zidingo ziyagcwaliseka.
Akungabazeki ukuthi ukusetshenziswa kwama-BWC kuzoletha ukuphepha okulahlekile ngoba umlando wezinto abantu kanye nezingxoxo zabo kuyisivikelo esiyindida. Ngakho-ke, noma yikuphi ukuphazamiseka kokuvikelwa kufanele kukhawulelwe ezingeni elicabangwayo futhi lilinganiswe ngezinzuzo eziphawuleka nezicacisayo. Ngokusha okusha, kungaba nzima ukuqagela uhla oluphelele lwemiphumela emihle nemibi yezidingo zansuku zonke nenethiwekhi enikezwayo. Ukwenza ibhizinisi lokushayela izindiza kunqunywe ngokujulile njengendlela yokuhlola ukuhlola imiphumela yezokuphepha yama-BWC maqondana nezinzuzo zawo, ngaphambi kokukhetha ukuthi uzowathumela noma cha, ukuthi kuqondakala kanjani, futhi kukuziphi izimo.
Ukuvikelwa kwabasebenzi kufanele kubhekwe ngendlela efanayo. Ama-BWC angabamba izikhulu zokugunyazwa komthetho eduze kwedatha yasekhaya, eqinisekiswa ngaphansi kwemithetho evikelekile yendawo evulekile. Izindawo ezingaba khona zokukhathazeka zihlanganisa ukusebenzisa ama-akhawunti e-BWC ukusiza ukuhlolwa kokusebenza kwabasebenzi. Abamele ngokufanayo banamalungelo okuvikelwa ngaphansi kwemithetho ehlukene kanye nokuqonda okuhlanganisiwe okungaba nomthelela kuhlelo lwe-BWC.
Ngethuba lokuthi ukusetshenziswa kwama-akhawunti kufakwe kunoma yiziphi izizathu ezizuzayo ezinhlosweni zezinhlelo zohlelo lwe-BWC, ngokwesibonelo, ukulungiselela ngokusemthethweni, ukucwaninga, noma ukuhlolwa kokusebenza, lezi zinhloso ezisizayo kufanele zihlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuhambisana kokusebenzisa okuthile, futhi abamele kufanele babe abafundile nxazonke mayelana nabo. Ngokunjalo, kumele kubekwe imigomo yokuhlanganisa amandla okuvikela, isibonelo, ukufihla ukuqonda kanye nanoma yikuphi okubonakalayo okuhlukanisayo, kanye nokuvimbela umlando ngokuqukethwe okubucayi.
Ukucabanga kokusebenzisa uhlelo lwe-BWC kuyamangaza, futhi imisebenzi yokushayela izindiza ichazwa njengesinyathelo esiphambili sokwamukelwa okude. Kujayelekile ukwenza okuhle lapho kuthunyelwa intuthuko entsha, ukubanikeza inkundla endaweni esinqunyelwe. Ngokwethuba lokuthi i-LEA ikhethe ukuthi amukele ama-BWCs kufanelekile, umsebenzi wokushayela izindiza uzobonisa indlela ama-BWC enza ngayo ngempela esimweni sawo nokuthi ngabe lokhu kuveza imiphumela emihle efeza inhloso yohlelo. Umsebenzi wokushayela indiza ngokufanayo angafundisa ukwakheka mayelana nesakhiwo sendlela engenakuphikwa, izidingo zokulungiselela ezifanele, nokubhekwa okudingakalayo.
Indlela yokubonisana yokudlulisela ama-BWCs, okubandakanya izinhloso zohlelo kanye nezidingo zokusebenza.
Ochwepheshe bokuphatha bokuqoqa idatha yomuntu ngamunye ngaphansi kohlelo.
Imisebenzi nemisebenzi yabasebenzi maqondana nama-BWC kanye nezincwadi zabo.
Izindlela zokusetha ukurekhoda okucacile okungagxili futhi ngaphezu kwalokho ukuvula nokuvala ama-BWC, kufanelekile.
Ukuhlelwa komhlahlandlela wokusebenza nokulungiselela abamele ukuqiniseka ukuthi izikhulu ziyakuqonda ukwabiwa kwezokuphepha kwama-BWC futhi ziyazi ngezibopho zazo ngaphansi kwale mikhakha namasu.
Ukuvikelwa kokuphepha kwabamele imininingwane yabo ebanjwe ama-BWCs.
Ukwabiwa kwesibopho maqondana nokuqinisekisa ukuthi amalungiselelo namasu we-BWC ayalandelwa, ngokuzibophezela okukhulu kanye nomholi omkhulu wenhlangano.
Imiphumela yokungahambelani nezindlela nezinhlelo.
Ilungelo labantu lohlelo lokusebenza. Abantu kufanele bafundiswe ukuthi babe nelungelo lokufaka umbuzo enhlanganweni eyengamele ezokuphepha ye-LEA maqondana nokuphathwa komlando oqukethe imininingwane yomuntu ngamunye ukunquma ukuthi ngabe sekwephulwe yini umthetho wokuvikela.
Isidingo sokuthi noma yiziphi izivumelwano phakathi kwama-LEA nezinhlangano ezingcweti zangaphandle zinquma ukuthi izindaba zihlala kulawulo lwe-LEA futhi zincike emithethweni yokuvikela impahla.
Ilungiselelo lokubuyekezwa kwangaphakathi kwesiko kohlelo lwe-BWC ukuze kubhekwane nokungaguquki necebo, amasu nemithetho yokuphepha ngezinto ezibonakalayo. Ukubuyekezwa kufanele kufake inhlolokhono yokuthi ukubhekwa kwe-BWC kuhlala kumenyezelwa yini ngezizathu ezishiwo lolu hlelo.
Ngaphakathi ngecebo le-PIA, ilungiselelo lama-PIAs nganoma yisiphi isikhathi lapho kukhona ukulungisa okukhulu kulolo hlelo.
Igama nemininingwane yokuxhumana yomuntu ongaphendula imibuzo evela kubantu abajwayelekile.
Ukusetshenziswa nokudalulwa kokuqoshwa:
Izimo lapho umlando wezinkathi ungabonakala khona. Inhlolovo kumele yenzeke nje esakhiweni sokwazi. Uma kwenzeka kungabazeki ukuthi kukhona ubugebengu obenzekile futhi bekungekho zimangalo zokungalungi, incwadi yezemibhalo akufanele ibonwe.
Izizathu zokuthi ama-akhawunti asetshenziswe noma yiziphi izimo ezivinjelayo noma inqubo, ngokwesibonelo, ukuvimba into ethambile kusukela ezinsizeni ezisetshenziselwa izinhloso zokulungiselela.
Imikhawulo echaziwe ekusetshenzisweni kokuhlolwa kwevidiyo nomsindo.
Izimo ama-akhawuntari angembulwa ngaphansi kwazo abantu bebonke, ucabange noma yimaphi, futhi nemingcele nganoma yisiphi isambulo esinjalo. Isibonelo, ubuso kanye nezimpawu zokubona abantu bangaphandle kufanele zigqashelwe futhi namaphimbo akhuliswe ngawo wonke amathuba.
Izimo lapho imibiko yezindaba ingembulwa ngaphansi kwenhlangano ngaphandle, kososesheni, ukwenza isibonelo, kwamanye amahhovisi kahulumeni ekuhlolweni okusebenzayo, noma kubahambeli abasemthethweni njengengxenye yenqubo yokuvulwa kwenkantolo.
Ukuvikela nokuphendula ukwephulwa:
Ukuvikelwa kwezokuphepha kusetshenziselwe ukuqinisekisa ukuthi ama-akhawunti awatholakalanga ngokungafanele noma aguqulwe.
Isakhi sokulawula noma ikuphi ikhefu lapho idatha yomuntu ngamunye itholakala ngaphandle kokugunyazwa noma ukutholwa ngokungahambisani namalungiselelo emithetho efanele yokuvikela.
Ukufinyelela kokuqoshwa ngabantu:
Inqubo yokuphendula ezimfunweni zokufinyelela ezincwadini zomlando, kufaka phakathi ukufinyelela kwemininingwane yomuntu ngamunye kanye nokufinyelela kuzidingo zedatha ngaphansi kwemithetho yemininingwane, njengabantu abacela ukulungisa kabusha imininingwane yabo. Lokhu kufaka igama nemininingwane yokuxhumana yomuntu okudingwa ukuthi kufinyelelwe kuye izidingo ezinjalo.
Ukugcinwa nokucekelwa phansi kwamarekhodi:
Isikhathi sokugcinwa nokuhlinzekwa kokulahlwa
Lezi zindlela nezindlela kufanele zenziwe zifinyeleleke kubantu bonke ukuze kuthuthukiswe ukuqondakala nokuziphendulela. Ukukhombisa obala ukuthi amasu nezindlela zikhona futhi iziphathimandla zibhekele ukuzimisa kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthi amalungelo abantu okuphepha akhona
kuqinisekiswe ngokwanele. Imibhalo kumele ngokufanayo ikhombise ubufakazi bokuthi kuxoxiswane ngenethiwekhi nokuzibophezela njengokuqonda kokuzwela komphakathi.
Ama-BWC akaqophi nje kuphela imisebenzi nenkulumo yomuntu, kepha futhi ngaphezu kwalokho ubudlelwano babantu nabanye ngaphakathi kokusebenza komlando, kufaka phakathi abangani, izihlobo, izibukeli, abantu abaxhashazwayo nabasolwa. I-akhawunti yabantu abasebenzisa ama-BWC iphakamisa ingozi ephawulekayo ekuphepheni okukodwa, futhi ama-LEAs kumele agxile ekuthumeleni nje ama-BWC ezingeni futhi ngendlela ebheka futhi eqinisekise ilungelo labantu kanye nabasebenzi ekuvikeleni ngakunye.
Izindlela Zokusebenzisa Ikhamera Yokusebenzisa Amakhamera igcine ukuguqulwa: I-December 4th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4175 Ukubuka kwe-5 Namuhla